Shiinaha Bacda Qadada Dib Loo Isticmaali Karo Dahaarka Dharka Qashinka Canaanta leh Aluminium Aluminium, Boorsada Boorsada Qadada ee Haweenka, Ragga, Iskuulka, Soosaarka Xafiiska iyo Warshad | Ugaarsade Cusub
Bacda Qadada Dib Loo Isticmaali karo Qaanso Box Qasac Caano leh Aluminium Aluminium, Boorsada Boorsada Qado ee Haweenka, Ragga, Iskuulka, Xafiiska
Xeerka alaabta: HT46011
Cabbirka (mm): 211 * 165 * 266mm
Midabka: Midab kasta oo pantone ah
Qiimaha FOB: $ 2.10- $ 2.40
Waqtiga dirida: Qiyaastii 40-60 maalmood
MAADDADA: Xumbo EPE xumbo adag leh + bireed aluminium ah ayaa ka ilaalin kara cuntadaadu inay ahaato mid diirran / qabow / cusub saacado, biyo la'aan, fududahay in la nadiifiyo BPA. Waxaan u cusbooneysiineynaa dusha sare ee Velcro geeska wareega oo dhan iyo wareejinta Velcro si aan si fiican uga shaqeyno
AMMAAN & LACAG LA'AAN: Bacdan qadada ah waa mid aan cunno lahayn, 100% aan sun ahayn, caddeyn qoyan, adkeysi u adkeysaneysa iyo ka-hortagga jirka, taas oo ku siineysa adeegsi muddo dheer soconaya, marka laga reebo, waxaa loogu talagalay jeeb gudaha ah oo lagu dhejiyo furayaasha, taleefanka, kaararka ama boorsadaada.
AWOODA BADAN: Cabbirka: 8.3Lx6.5Wx10.5H inji, oo leh qalab dheeri ah oo la casriyeeyay. Cuntadan qadada ah waxay u fiican tahay xirxirida xaddi badan oo cunto ah, xitaa waxay ka koobnaan kartaa cuntada maalintii oo dhan ee aad u baahan tahay, ee ku habboon shaqada, banaanka iyo isticmaalka maalinlaha ah.
BULSHADA BULSHADA: Boorsooyinka cufan ee dib loo isticmaali karo waxay bixiyaan xalka soo jiidashada iyo fudud ee baahiyaha badan ee keydinta. Waa hab moodo ah oo lagu qaado cunnooyin, cunto fudud, cabitaanno, cabitaanno loogu talogalay dumarka, ragga iyo carruurta, ama si fudud loogu isticmaalo boorsada lagu qabto oo lagu tago.
- Dahaarka dahaarka aluminium ee waara oo fududahay in la nadiifiyo oo bilaash ah BPA.
-Ka sii darid dahaadhka foomka 'EPE' wuxuu ka dhigayaa cuntada mid qabow oo cusub.
-Qolo ku filan oo haysa dhalada biyaha, hal ama laba weel oo lagu daray dhawr xabbo oo miro ah.
-Waxaa lagu qalabeeyaa jeebka keydka ah ee lagu keydiyo kaararkaaga, telefoonkaaga, boorsadaada iyo furayaashaada.
Bacda kubado badan oo shaqeynaya
-Waa hab moodo oo cunto, cunto fudud, cabitaanno, cabitaanno, sidoo kale hadiyad ugu fiican loogu talagalay dadka waaweyn, haweenka, ragga, gabdhaha da'da yar iyo wiilasha!
-U diyaari cuntadaada mid fudud una fududee nolol maalmeedkaaga caafimaad wixii hada ka dambeeya.
-Waxaa lagu soo bandhigay qaab muuqaal ah, boorsada qadada ee HOMESPON waxaa loogu talagalay inay ahaato kubbad WADAJIR AH.
-Matarka: Cufka & Dareenka dahaarka aluminium
-Qiyaas: 8.3Lx6.5Wx10.5H inji
-Laba xadhig oo cudbi adag oo adag oo cudbi ah ayaa saamaxaya in bacda lagu xidho gacanta ama gacanta, waxaad mar walba awoodi doontaa inaad xirxirto oo aad qado caafimaad qabtid meel kasta oo aad tagtid.
Hore: Boorsooyinka Boorsada Tennis-ka Boorsooyinka waaweyn ee Tennis-ka ee Haweenka iyo Ragga si ay u qabtaan Rakis Tennis ah, Paddleball Paddles, Badminton Racquet, Squash Racquet, Kubadaha iyo Qalabka kale
Xiga: Boorsooyinka Dibedda ee Ciyaaraha Dibedda ah ee 3P Boorsooyinka Xeeladeed ee Milatariga ah ee loogu talagalay Socdaalka Kaamamka Kareemka Bixinta Biyo-Xidheenka-iska caabbinta
Bag Qado Caruurta dahaaran ee Wiilasha iyo Gabdhaha, Lu ...
Sanduuqa Qado ee Asalka ah Bag Qado
Dahaaran Qado Box Bag Leaproof Cunto Diyaarinta Coo ...
Bacda qadada dib loo isticmaali karo oo garabka lagala bixi karo Str ...
Bag Qado Large Dahaaran Box Qalliinka jilicsan ...
Premium Qado Box, Bag Qado Dahaaran ee Ragga ...